“निर्वाचन नै प्रभावित,हुने ख,त,रा :आयोगमा नेकपा कि फुटेर आउनुपर्यो कि मिलेर “”! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“निर्वाचन नै प्रभावित,हुने ख,त,रा :आयोगमा नेकपा कि फुटेर आउनुपर्यो कि मिलेर “”!
“काठमाडौँ, २९ पुष । मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले वैधता पाउने–नपाउने कुराको छिनोफानो न्यायालयले गर्दै रहे पनि प्रस्तावित चुनावको अर्को प्रमुख चुनौती नेताभित्रके विवाद बन्न पुगेको छ ।
“नेकपा बाहिर फुटिसकेको छ तर कानुनी रुपमा एक छ । आयोगमा एउटै नेकपा छ तर आयोगलाई एउटै पार्टीको लेटरहेडबाट अलग–अलग पत्राचार भइरहेका छन् । ‘उहाँहरु फुटिसक्नुभएको छ!
“तर दुवै समूहले त्यसलाई स्वीकार गरिरहनुभएको छैन, समस्या त्यहाँनिरै छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको असर दुई सातापछि आयोगमा देखिनेछ र समग्र निर्वाचन कार्यक्रमलाई प्रभावित बनाउने सम्भावना रहन्छ ।
“आयोगले वैशाखको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर त्यसमा भाग लिन इच्छुक दलका लागि माघ १५ गतेबाट दल दर्ताको समय दिँदैछ । संविधानले नै हरेक निर्वाचनपूर्व दल दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
“नेकपा विवादले एएटा किनारा नलिएको अवस्थामा दल दर्ता गराउन ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै पक्ष आयोगमा पुग्नेछन् तर दुवैले नेकपा र सूर्य चिन्हकै दाबी गर्नेछन् । एउटै नामबाट दुई दल दर्ता गर्न मिल्ने कुरा भएन ।
‘”विवादलाई सेटल गरेर नजाँदा दल दर्ता कै समयमा झगडा हुन्छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘नेकपा कि टुटेर आउनुपर्यो वा मिल्नुपर्यो । नभए त्यसले चुनावलाई प्रभावित बनाउँछ ।’आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
Previous “दाहाल-नेपाल,को नजर गण्डकीमा”
Next “सीमा विवाद,बारे बृहत् रुपमा छलफल गर्न भारत अनिच्छुक,,,।
11 hours ago Mechi Mahakali
14 hours ago Mechi Mahakali
6 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता
50 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता
“माधव नेपाल,लाई हरियो, सर्पको संज्ञा दिदै, ओलीले भनेः अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति,को हात छ”